Anosibe : ramatoabe tratra nivarotra rongony | NewsMada
Anosibe : ramatoabe tratra nivarotra rongony
Saron’ny polisy miady amin’ny zava-mahadomelina, teny Anosibe Tsena, ny alarobia teo ny ramatoabe iray mpivarotra rongony. Tratra teny aminy ny fonosan-drongony marobe. Nilaza izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa izany antsoina hoe Ndaty izany no mpamatsy rongony azy ka 30 000 Ar ny hividianany ny iray selofanina eny Ambohimanarina.
Efa ho telo taona izay no nanaovany ity asa ratsy ity, saingy izao vao tratra, araka ny fanazavany tamin’ny polisy.
Voasambotry ny polisy ihany koa ny rangahibe iray 47 taona mipetraka eny Ambohitrimanjaka. Noraisim-potsiny teo am-pifohana rongony. Nilaza izy fa sady mivarotra no mifoka rongony. Eny Ambohimanarina koa no fakany rongony ka tsinjaraina anaty fonosana vitsivitsy mialoha ny hamarotana azy. Ireo mpanao biriky eny Ambohitrimanjaka no tena mpanjifa ny entany, raha ny filazany.
Efa fantatra izany fa eny Ambohimanarina ny misy ireo mpamongady rongony ka tokony hojeren’ny tompon’andraikitra akaiky ny momba ireo mpanao trafikana rongony ireo. Tsy mbola hita na tratra anefa ny tena atidoha manaparitaka izany fa ireo mpividy hatrany no tratra hatreto.